Smart TV ကို နားစှငျ့ပွီး သုံးစှဲသူတှကေို စကျနဲ့ဖမျး၊ နောကျကှယျက လကျမညျးကွီး ဘယျသူလဲ? - Pandaily
Categories: Industry ကိုXiaodan Xi မေ 2, 2021 မေ 2, 2021 မှာ Posted
မကြာသေးခင်ကပဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Vitri ဟာ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ချိုးဖောက်ပြီး ပေါက်ကွဲမှုတွေ လုပ်ခဲ့လို့ တရုတ်စမတ်ရုပ်သံသုံးစွဲသူတွေ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ V2EX (Online Logether Forum) တွင် အသုံးပြုသူတစ်ဦးကပိုက်ဆံပေးပြီးပြီUnderstanding Process တွင် သတင်းအချက်အလက်များကို ဆက်တိုက်ဖော်ပြနေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Viti Service က သူလျှိုလုပ်ရပ်တစ်ခုအတွက် အင်တာနက်တွင် ချိတ်ဆက်မိသမျှ ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာ Gozen Data လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရတာ ဖြစ်ပြီး တီဗီထဲမှာ Android စနစ်နဲ့ ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ စကင်ဖတ်မယ့် ပစ္စည်းတွေမှာ အိမ်ရှင်အမည်၊ Mac, ip လိပ်စာ၊ Network နောက်ကျချိန်၊ WiFi SSID အမည်နဲ့ တခြားဒေတာတွေကိုတောင် ပို့ပြီး ဒီထဲမှာ “Gozen Data ” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီဘေ့စ်ထဲမှာGz-data.com.
Website ကို data company Tound က ကာလတုနျးက လုပျခဲ့တာပါ။ ဒီဆောင်းပါးကို Gozen ရဲ့ တရားဝင် Website မှာ ဖော်ပြခဲ့ပေမယ့်တခွားပှငျ့လငျးတဲ့ သယံဇာတအဆိုပါ ကုမ်ပဏီသညျ ဗိုလျခြုပျကွီး Viti နှငျ့ ကာလရှညျကွာစှာ လကျတှဲတညျဆောကျထားရုံသာမက Smart TV Producer မြားနှငျ့ ဆကျတိုကျ လကျတှဲတညျထောငျထားသညျ့ TCL, TCL, Toshiba နှငျ့ Philips တို့ ပါဝငျသညျ။ ယင်းကုမ္ပဏီအနေဖြင့် Information များကို စုဆောင်းရာတွင် Package စနစ်ဖြင့် အလွှာလိုက် စိုက်ထုတ်ရသည့် စနစ်ဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှု ကိရိယာများနှင့် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၄၉ သန်းဝန်းကျင်ကို ရယူခြင်းဖြင့် တရုတ်သို့ အလုံးအရင်းဖြင့် ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Gozen ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ “မိသားစုနဲ့တစ်ဦးချင်းအတွက် အသုံးပြုမယ့် ပရိသတ်အားပေးမှု၊ အဆင့်သတ်မှတ်မှု၊ စိစစ်မှု၊ အဆင့်သတ်မှတ်မှု၊ ကြော်ငြာနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လေ့လာဆန်းစစ်မှု” လို့ ဆိုထားပေမယ့် ဒီအချက်ကို မပြောင်းလဲစေဘဲ အွန်လိုင်းပေါ် ထိုးဖောက်ပြီး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေနဲ့ ငြိစွန်းနေတဲ့ ဖြစ်ရပ်တခုလို့ သတိပေးထားပါတယ်။ အရပျဆိုကျဘာလုံခွုံရေး ဥပဒပွေညျသူ့သမ်မတနိုငျငံအနနေဲ့ ဆိုကျဘာထုတျကုနျတှနေဲ့ ဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးတှမှော အသုံးပွုသူတှရေဲ့သတငျးအခကျြအလကျတှကေို စုဆောငျးပေးတဲ့နရောမှာလညျး အသုံးပွုသူတှကေိုအတိအလငျး အသိပေးသငျ့ပွီး ခှငျ့ပွုခကျြတောငျးပွီးမှ သုံးစှဲသူတှကေိုလညျး အသိပေးသငျ့ပါတယျ။ တကယျလို့ သုံးစှဲသူတှရေဲ့ ကိုယျရေးကိုယျတာ အခကျြအလကျတှကေို ပါဝငျလာအောငျ ပံ့ပိုးပေးမယျဆိုရငျ ဒီဥပဒကေို လိုကျနာဖို့ တာဝနျရှိပါတယျ။
Gozen က စှပျစှဲခံရသူတှကေို မွနျမွနျတုံ့ပွနျဖို့ တောငျးပနျစာတဈစောငျထုတျပွနျခဲ့ပွီး “I Way ကုမ်ပဏီနဲ့ ဆကျသှယျခဲ့ပါတယျ၊ ပထမဆုံးရုံးခြိနျးမှာ ‘Gozen Data Service’ ကို ပိတျလိုကျလို့ပါ”နဲ့ နကျနကျနကျရှိုငျးရှိုငျး စုံစမျးခဲ့ပါတယျ။
Smart TV Producer Gwey က ယင်းကုမ္ပဏီနှင့် ခုနစ်နှစ်ကြာ လက်တွဲဆောင်ရွက်မှုကို ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး ယင်းကြေညာချက်၌ “ယင်းဖြစ်ရပ်သည် ပြင်းထန်သည့် တန်ဖိုးများကို ချိုးဖောက်ရာ ရောက်ကြောင်း ကြေညာ၍ Gravi သုံးစွဲသူများကို ရာထူးကနေ ရပ်စဲ၍ Core Value of the Chief of the Gozen Data Technology Co., Ltd နှင့် ပူးပေါင်း၍ တရားမဝင်ရယူထားသော အချက်အလက်များကို ဖယ်ရှားရန် အမိန့်ပေးခဲ့ခြင်း” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
Topics: မွငျကှငျး၂၀၂၀ အတှကျ အကောငျးဆုံး Smart TV: Xiaomi, Haikin, Samsung, TCL နှငျ့ အခွား 4K ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲမြား
သို့သော် ဒေတာစုဆောင်းခြင်းနှင့် အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Viti က ဥပဒေ၏ အကျိုးဆက်များကို ကိုယ်တိုင်လျှော်ဖွပ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးဟု ဆိုသည်။ “ ဆိုကျဘာလုံခွုံရေးဥပဒေ” တှငျ ဆိုကျဘာဝနျဆောငျမှုပေးရာတှငျ လိုအပျခကျြမြား၊ ဝနျဆောငျမှုမြား ပေးရာတှငျ လိုအပျသညျ့ အစီအမံမြား ဆောငျရှကျသငျ့ကွောငျး၊ ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျရေးအခကျြအလကျမြား စုဆောငျးရာတှငျ လုံခွုံရေး၊ သတငျးအခကျြအလကျမြား ပေါကျကွားခွငျးမှ ကာကှယျနိုငျရေး၊ ပကျြစီးခွငျး၊ ဆုံးရှုံးခွငျး၊ ဆုံးရှုံးခွငျး စသညျတို့ ပါဝငျသညျ။ ကိုယျရေးကိုယျတာအခကျြအလကျမြား ပေါကျကွားခွငျး၊ ပကျြစီးခွငျး၊ ပြောကျဆုံးခွငျး၊ ပွနျလညျကုစားခွငျးမြား ပွုလုပျသငျ့ပွီး သတျမှတျထားသညျ့ အခြိနျနှငျ့ အညီ အခြိနျနှငျ့တပွေးညီ အသုံးပွုသူမြားကို သကျဆိုငျရာ အာဏာပိုငျမြားသို့ အကွောငျးကွားရနျ ဖျောပွပါရှိသညျ။
Dawei က Gozen ရဲ့ ဥပဒခြေိုးဖောကျမှုကို သတိမထားမိပမေယျ့ ဖွဈနိုငျခွပေိုမြားတယျလို့ ထငျရပါတယျ၊ ဒါဟာ ဈေးကှကျပွိုငျဆိုငျမှု ပွငျးထနျနခြေိနျမှာ မကျြလုံးကို ပိတျပွီး မကျြလုံးကို ဖှငျ့လိုကျသလို ဖွဈနတေဲ့အတှကျ တဦးခငျြးစီရဲ့ ဒတောတှကေို အလှနျအကြှံစုဆောငျးပွီး အငျတာနကျ ဝနျဆောငျမှုပေးသူ အခငျြးခငျြး အပွိုငျအဆိုငျ လုပျဆောငျနကွေပမေဲ့ အကငျြ့ ပကျြစရာ —လို့ ဆိုလိုပါတယျ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အဆိုပါကုမ္ပဏီများသည် ဥပဒေချိုးဖောက်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။